အစားအသောက်ကြောင့်ရာသီအလိုက်ဓါတ်မတည့်မှုများဖြစ်စေနိုင်ပုံ - Hello Sayarwon
Dr. Ye Pyae Hein မှ ရေးသားသည်။ 12/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
-နေ့တစ်နေ့တွင်သင်နိုးထလာပြီး နှာချေခြင်း ၊ နှာခေါင်းယားခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း ၊ မျက်စိနီရဲ၍မျက်ရည်ကျခြင်းတို့ခံစားနေရပါကသင်သည်ရာသီကိုလိုက်၍ဖြစ်တတ်သော ဓါတ်မတည့်မှုကိုခံစားနေရခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုအချင်းအရာသည်အဖြစ်များသော ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်သည်။ ရာသီအလိုက် ဓါတ်မတည့်မှုများအတွက် သင်စားနေသောအစားအစာကလည်းအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်ကိုသင်သတိပြုသင့်ပါသည်။
-ရာသီအလိုက်ဓါတ်မတည့်ခြင်းတို့သည် ကောက်ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သောအဖျားရောဂါနှင့် ရာသီအကူးအပြောင်းတွင်ဖြစ်တတ်သော နှာခေါင်းယားယံခြင်းတို့ကိုအဓိကဆိုလိုပါသည်။ နှစ်တစ်နှစ်၏အချို့အချိန်များတွင် ထိုရောဂါတို့၏လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ပြင်ပမှမှိုပိုးများ၏ ပိုးမှုန်များနှင့် ပေါင်းပင်မြက်ပင်တို့၏ဝတ်မှုန်တို့ကြောင့် ဖြစ်ရသည်။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းအခံရှိသူတို့၏ ခုခံအားစနစ်ကထိုပြင်ပအမှုန်များကိုရှူမိသောအခါ ပြန်လည်တိုက်ထုတ်ရန်ဓါတုပစ္စည်းများကို ထုတ်လွှတ်တတ်သည်။ ထိုထုတ်လွှတ်သောပစ္စည်းများကဓါတ်မတည့်သောအောက်ပါလက္ခဏာများကို ဖြစ်စေပါသည်။
-ထိုလက္ခဏာများသည် မျက်လုံးနီရဲယားယံခြင်းနှင့် မျက်ရည်ကျခြင်းတို့နှင့် တွဲဖက်ဖြစ်တတ်ပြီးဓါတ်မတည့်မှုေ
-ရာသီအလိုက်ဓါတ်မတည့်မှုကိုဖြစ်စေသောအစားအစာများရှိပါသည်။ ထိုဝေဒနာခံစားရလေ့ရှိသူများက အောက်ပါအစားအစာတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
-အရွက်စားမုန်လာသည် အပြန်အလှန်ဓါတ်ပြုတတ်သည့်သဘာဝရှိသည်။ အပင်များ၏ဝတ်မှုန်ကိုဓါတ်မတည့်သူများ စားသုံးပါကဓါတ်မတည့်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားတတ်သည်။
-ဓါတ်မတည့်ခြင်းအခံရှိသူများတွင် ဝင်ရောက်လာသောအရာဝတ္ထုများကိုတုန့်ပြန်ရန်ခန္ဓါကိုယ်ကဟစ်စတမင်း(Histamine)ကိုထုတ်လွှတ်ပေးသည်။ ခရမ်းချဉ်သီးတွင်ဟစ်စတမင်းဓါတ်များ ပါဝင်ပြီးအရွက်စားမုန်လာကဲ့သို့ဓါတ်တုန့်ပြန်တတ်သည့် သဘာဝရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ရာသီအလိုက်ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်တတ်သူများသည် ခရမ်းချဉ်သီးကိုမရွေးချယ်သင့်ပါ။
-ဟစ်စတမင်းကြွယ်ဝစွာပါဝင်သောအစားအစာဖြစ်ပြီးမျက်စိနီရဲယားယံခြင်း ၊ မျက်ရည်ကျခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
-အပင်များ၏ဝတ်မှုန်များကို ဓါတ်မတည့်သူများသည် ဗာဒံစေ့အပါအဝင် အစေ့အဆန်များကိုစားသုံးခြင်းဖြင့် ဓါတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာပိုဆိုးစေနိုင်သည်။ ဗာဒံစေ့ပါဝင်သောနွားနို့နှင့် ကွတ်ကီးမုန့်များသည်လည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဓါတ်မတည့်သူများအနေဖြင့် ဗာဒံစေ့ကိုရှောင်သင့်ပါသည်။
-ဝိုင်သည်ဟစ်စတမင်းကြွယ်ဝသော စပျစ်သီးကိုအချဉ်ဖောက်၍ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ထို့ပြင်ဝိုင်သည် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါကဲ့သို့ ဆိုးရွားသောကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဓါတ်မတည့်သူများအနေဖြင့် ဝိုင်သောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
-Ragweed ဟုခေါ်သောရေညှိမျိုးနွယ်အပင်တစ်မျိုးကိုဓါတ်မတည့်သူသည် ငှက်ပျောသီးနှင့် စားမိပါကဓါတ်မတည့်ခြင်း ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည့်အတွက် ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။
-အပင်ဝတ်မှုန်နှင့် ပန်းဝတ်မှုန် တို့ကိုမတည့်သူသည် တရုတ်နံနံပင်ကိုလည်းရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။
-လက်ဖက်ရည်ပူပူသည် ချောင်းဆိုးခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်သော်လည်း Ragweed ပင်ကိုဓါတ်မတည့်သည့်သူများသည် ချာမိုမိုင်းပင်နှင့် ပြုလုပ်ထားသောလက်ဖက်ရည်ကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
-ရာသီအလိုက်ဓါတ်မတည့်မှုများရှိသူတို့သည် ဖြစ်စေရသောအကြောင်းအရင်းအပြင် ရာသီဥတုနှင့် အစားအစာကိုလည်းသတိထားသင့်ပါသည်။ အချို့အစားအစာများကဓါတ်မတည့်မှုကို ဖြစ်စေပြီးအချို့ကအခြေအနေကိုပိုဆိုးစေနိုင်သည်။ ကျန်းမာစွာနေထိုင်ရန်အချိန်ပြည့်သတိထားသင့်ပါသည်။
Can What We Eat Affect Seasonal Allergies? – Food & Nutrition. http://www.foodandnutrition.org/Winter-2012/Can-What- We-Eat- Affect-Seasonal- Allergies/Accessed January 12, 2017
Foods to Avoid If You Have Seasonal Allergies – the Daily Meal. http://www.thedailymeal.com/foods-avoid- if-you-have-seasonal- allergiesAccessed January 12, 2017
Seasonal Allergies Hay Fever – KidsHealth. http://kidshealth.org/en/parents/seasonal-allergies.htmlAccessed January 12, 2017